यिनै हुन् अमेरिकामा नेपाली ट्याक्सी चालकलाई दु र्ब्य ब हा र ग र्ने सुन्दरी महिला, हेर्नुहोस् आखिर को हुन् उनि ? – Namaste Host
March 15, 2021 March 15, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on यिनै हुन् अमेरिकामा नेपाली ट्याक्सी चालकलाई दु र्ब्य ब हा र ग र्ने सुन्दरी महिला, हेर्नुहोस् आखिर को हुन् उनि ?
क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्कोमा नेपाली उबर चालक शोभाकर खड्कामा थि दु र्ब्य बहा र ग र्ने इरानी मूलकी महिला अर्ना किमाई बि रु द्ध गाडी ठो क्का एर एकजना महिलालाई घाइते बनाएको आ रो पमा मु द्दा दायर भएको छ ।
सन् २०१९ को फेबु्रअरीमा किमाईले गाडी ठो क्का एर एकजना महिलालाई सख्त घाइते बनाएर भागेको मु द्दा दायर गरिएको हो ।
अर्ना किमाईले अ सुर क्षितरुपमा गाडी मोडेर अर्को गाडीलाई ठ क्क र दिंदा उक्त गाडीमा रहेकी महिला सख्त घाइते भएकी थिइन् । अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा गाडीको क्ष तिपूर्ति, उपचार खर्च र आम्दानी गु मे को क्ष ति पू र्ति दावी गरिएको छ ।
यसैबीच उबर चालकलाई दु र्ब्य बहार गर्ने ती महिलाले हाइवेमा १ सय २२ माइल प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी चलाएको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको छ ।
उक्त भिडियोमा गैरकानूनी रुपमा हाइवेमा बढी स्पीडमा गाडी कुदाएको देख्न सकिन्छ । ती महिला विगतमा पनि कम्तीमा तीनपटकसम्म पक्राउ परेको खुलासा भएको छ ।
उनी सन् २०१५ मा एकपटक र २०२० मा दुईपटक पक्राउ परेको रेकर्डमा देखिएको छ । उनी सन् २०१५ को जुलाई १४ मा अरुको सामान ज बर्ज स्ती लि एको अभियोगमा लस ए’न्जलसमा पक्राउ परेकी थिइन् ।
त्यस्तै सन् २०२० को फेबु्रअरी १२ मा अरेन्ज काउन्टीको प्रहरीले उनलाई चोरीको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै सन् २०२० कै जुलाई १६ मा उनी अरुको गाडी विना अनुमति लिएर हिडेको अभि यो गमा पक्राउ परेकी थिइन् ।
२४ बर्षकी अर्ना किमाईले नेपाली उबर चालकमाथि खोक्ने, फोन खोस्ने, मास्क च्या त्ने र अ पश ब्द बोल्ने गरेकी थिइन् । उनले कालो पोशाक लगाएकी थिइन् । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छैन ।
उनले प्रहरी समक्ष आ त्म स म र्पण को तयारी गरेको उनका वकिललाई उद्दृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ ।
मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा आ क्रा म क बनेकी अर्नालेले चालक खड्काको मुखबाट मा स्कमात्र फु स्का इनन् उनको मोबाइल समेत लिने प्रयास गरिन्।
खड्काले महिलाले मास्क नलाएको देखेपछि नजिकैको ग्यास स्टेसनमा गएर किन्न अनुरोध गरेका थिए।
आ क्रो शि त महिलले ट्याक्सी छोडेर जाने बेलामा आँखा पोल्ने धुलो प्रहार गरेको खड्कालाई उदृत गर्दै सन फ्रान्सिस्को प्रहरी प्रवक्ताले बताएका छन्।
हफपोस्टले जनाएअनुसार आप्रवासी चालक खड्काले आफ्नो रंगभेदका कारण आफूमा थि दु र्व्य व हार भएको जनाएका छन्।
अर्को छेउमा रहेकी रातो पोशाक लगाउने मलेसिया किङलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
ती महिलामा थि आ क्र मण गरेको, अरुको सामान ज बर्ज स्ती खो से को र स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नियम उल्लंघन गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
उबरले नेपाली चालकमाथि भएको यो आ क्र मण भ या वह भएको बताउँदै अर्नाको एकाउन्ट खा रे ज गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि ती युवतीले अब लिफ्ट चढ्ने घोषणा गरेकी थिइन् । तर लगत्तै लिफ्टले पनि ती युवतीमाथि प्र तिब न्ध लगाएको थियो ।
घटना लिफ्टसँग सम्बन्धित नरहेको भएतापनि चालकमाथि यस्तो भएपछी स्वीकार भएको लिफ्टले जनाएको थियो । त्यसैकारण ती युवतीलाई लिफ्टमा स्थायीरुपमा नै प्र ति ब न्ध लगाइएको लिफ्टले स्पष्ट पारेको थियो । हेरौ उनको तस्बिरहरु :